トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "umlawuli", iimvakalelo elikhuselayo?
"UMlawuli" isikhundla reverse intsingiselo
umsebenzi ka-3500 yen apreyizali simahla ukufumana indlela itrone
e ikhaliphileyo ehleli mlawuli ngesidima ukuya ithamsanqa-mathamsanqa. Mbusi ubunzima isithsaba, unaso isandla yintonga. Kwaye sphere emele leyinene kwi intonga, nto leyo umnqamlezo emela ihlabathi wokomoya zokuhombisa, ekubeni idweliswe kwi ukuphakama amehlo Intonga, ukujonga izinto umlawuli usoloko phambili ngenkangeleko ezikuyo, kuye zachazwa ikhadi emele iinkokeli kunye ngutata ukuba bawurhuqa ihlabathi nomkhosi owomeleleyo. Umlawuli we ikhadi oyindoda, leyikulu, uzinzo, kuzaliseka, amandla inyathelo, igunya, imele ukuba luck iza Hirake ngu ukuziphatha ndlongondlongo.
umlawuli kwekhadi esimelele iimvakalelo
ubunkokheli obuqinileyo kunye nenkokheli mntu kwisikhundla esihle uthathwa ukuba intsingiselo umlawuli ukuba ufumana indawo entle, zibekwe uthando ngamandla senze ukuba abantu ababini yobudlelwane nzulu kuzo, okanye usenokucinga ukuba inzaliseko.
Kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu umdlali ufuna uphile uthando ndlongondlongo. Welinye iqela usoloko ucinga uthando nawe ngentembeko kwi ezintle, ngenxa yokuba kufuneka baye entsimini ngenjongo nawuphi na umtshato, ungafuna ukuya uthandana uthembe elinye iqela. Kwimeko abantu
uthando ezingabuyekezekiyo kufuneka ube ukuba usabele ngentembeko nxamnye nawe. Kwelinye icala, kungenzeka ephakamileyo kungabonwa eluthandweni into. Yaye ukuba ilingane status quo, makhe sizame ukuba ukholose ukusuka kwelinye iqela.
umlawuli kwekhadi apho intsingiselo yi "ubuvila". Siza ukuvula indlela kancane uhamba phambili ukuze bakholwe elinye iqela le ningoyiki nto. Ekubeni leqela umntu zobunkokeli sasijonge Ukuze ikhaliphileyo, nikholwe uye ukuthandana.
umlawuli ukuba umva indawo soMhlekazi bekumele ukuba kuthetha yaphuma kwindawo umva, elinye iqela akayixhasi ngentembeko ngokuphathelene ingxaki yakho Kukho impahla inshorensi. Musa ukucinga umtshato eluthandweni nawe, andifuni ukuthatha uxanduva, kusenokwenzeka ukuba uthandana yi inertia. To
na Kira kuphekwa isimo sengqondo ngenxa yokuba ithanda ukuba nobugoci ngokweemvakalelo, Okokuqala kuyimfuneko ukuze luzole phantsi iimvakalelo ngalinye ezinye ukugcina umgama.
ungafuna ukusombulula ntle Ukuba kunjalo loo nto ukutshintsha isimo sengqondo elinye iqela. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo thina ngokunyanisekileyo ukuphendula kuwe, kodwa kusenokwenzeka ukuba zingajongwa phezulu into yakho.
kuba iya kuba nzima ngakumbi ukuba sele ubudlelwane njengoko abangaphantsi kunye nabaqeshi ukuze ibe nolwalamano naye, First uya kuza kuba yimfuneko ukuba ku-cool ukufumana phandle sengqondo omnye qela. Kucetyiswa ukuba azame ukuya ngexesha.